तपाइकाे याे हप्ताभरीकाे राशिफल हेर्नुहाेस्, यि राशिहरूका भाग्य चम्कने छन् भने केहीकाे घातक - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा, यस्ताे छ माेडालिटी
रसुवाको विभिन्न क्षेत्रमा हिमपात, जनजिवन कष्टकर बन्दै
कावासाेतीमा सेनाको बस दुर्घटना हुँदा तीस जना घाइते, केहीकाे अवस्था गम्भीर
हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात, तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमान यस्तो छ
नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै, उपनिर्वाचनको समीक्षा सहित छलफल हुने
युनाइटेड युथ क्लव सर्कुवाको १५ औँ बार्षिकोत्सव कार्यक्रम तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुढाद्धारा उद्घाटन,
उधौली, धान्य पूर्णिमा र योमरी पूर्णिमा मनाइँदै
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
लोडर दुर्घटनामा एकको मृत्युु, तीन गम्भीर घाईते
जैमिनीमा ईन्जिनियर पदको नतिजा सार्वजनिक, दमेकका सापकोटा छनोट- नतिजा हेर्नुहाेस्
भ्रममा नपर्नुस्, भोलि सार्वजनिक विदा छैन : गृह मन्त्रालय
करणी प्रयासको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ, कहाँ गयाे समृद्दीकाे नारा ?
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक आज अपरान्ह ४ बजे बस्दै
धावन मार्ग स्तराेन्नती गरेसंगै भरतपुर विमानस्थल आजदेखि सुचारु
लोक सेवा आयोग ठुलाे संख्यामा बिज्ञापन, एक हजारभन्दा बढी शाखा अधिकृतका लागि जागिर खुल्यो,
Home दर्शन/संस्कृति तपाइकाे याे हप्ताभरीकाे राशिफल हेर्नुहाेस्, यि राशिहरूका भाग्य चम्कने छन् भने केहीकाे घातक
तपाइकाे याे हप्ताभरीकाे राशिफल हेर्नुहाेस्, यि राशिहरूका भाग्य चम्कने छन् भने केहीकाे घातक
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: १९ श्रावण २०७६, आईतवार ०६:१५
तपाइको यो सप्ताह
एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । साताको मध्यमा शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ । नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,९ र शुभरङ्ग रातो वा हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महाँकालीजीको स्मरणगरी आरम्भ गर्दा शुभफल मिल्नेछ ।
यो सातामा घरायसी वातावरणमा केही असामान्यता देखिन सक्नेछ । गरेका कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछ । डुबेको धन उकास्न दौडधूप गर्नुपर्छ । बुधवारबाट बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । वस्त्र, अलङ्कार आदि खरिद गर्ने योग छ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,५ र शुभरङ्ग सेतो वा सिन्दूरे हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि बगलामुखीको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
नयाँ काम वा रोजगारको अवसर मिल्नेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा हुनेछ । आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्नेछ । मित्र वा आफन्तको सहयोगबाट मिल्नेछ । बुधवारबाट कामहरु अधुरै रहलान् । लगानी डुव्ने भय छ सचेत रहनु होला । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महादेवको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ, नयाँ–नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । पुनर्मिलनको योग रहेको छ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,३ र शुभरङ्ग सुन्तलारङ्ग वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि मान्यजनको आशीर्वाद लिएर कार्य गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरु पत्ता लाग्नेछन् । विशेष यज्ञयागादि तथा धार्मिक कृत्यमा सहभागीको अवसर पनि मिल्नेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,९ र शुभरङ्ग सुन्तला वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको दर्शनगरी आरम्भ कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा अनावश्यक यात्रा हुनेछ । प्रेममा मनमुटावका साथै मन कमजोर रहला । दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । साताको अन्त्यबाट साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउला । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग वैजनी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा राम्रो हुनेछ ।
यो सातामा वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ । व्यवसायको सन्दर्भमा रमाइलो यात्रा हुनेछ । साताको अन्त्यमा आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि केहि संघर्श गर्नु पर्ला । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट सफलता मिल्नेछ ।
यो साता एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । महिला वा मित्रबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । यज्ञयज्ञादि तथा धार्मिक कृत्यमा विशेष सहभागीको अवसर पनि मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,९ र शुभरङ्ग सुन्तला हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको दर्शनगरी आरम्भ कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । बौद्धिकताको विकास हुनेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । छोटो समयमा विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । कलकारखाना र बन्दव्यापारमा फाइदा हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,४ र शुभरङ्ग पहेंलो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महासरस्वतीको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा लाभ मिल्नेछ ।
यो सातामा नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनु होला । प्रेमी तथा प्रेमिकाको भाषा परिवर्तनले मनमा दुविधा उत्पन्न हुन सक्नेछ । मित्रहरूले वचन पूरा नगर्दा आर्थिक हैरानी बेहोर्नुपर्ला । साताको अन्त्यमा मनोरञ्जन र रोमाञ्चक यात्राको योग छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ७,९ र शुभरङ्ग कालो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि दुर्गाजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
बन्धु बान्धवबाट विशेषसहयोग मिल्नेछ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । व्यापार तथा सेयर कारोबारमा रुचि बढ्नेछ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मनलाग्नेछ । हराएको आत्मविश्वास जाग्नेछ । रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ६,८ र शुभरङ्ग खैरो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको दर्शन गरी आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
यो साता नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्ग छाउनेछ । वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । पर्यटकीय स्थलको भ्रमणले मन लोभ्याउनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्ध कसिलो रहला साथै पुनर्मिलनको योगपनि रहेको छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,६ र शुभरङ्ग घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
देशमा बिपत्तीले छाेडेन, दाेलखामा पहिराेले ११ घर बगायाे, २ बेपत्ता ३० घर बग्ने जाेखिममा
सुनकाे भाउ अहिलेसम्मकै महंगाे, किन्नेलाइ भन्दा बेच्नेलाइ फाइदा
२८ मंसिर २०७६, शनिबार १५:००
२८ मंसिर २०७६, शनिबार १२:२७
२८ मंसिर २०७६, शनिबार १२:१०
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार १५:१३
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०७:१९
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार २०:५७
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार १५:२८
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार १२:१२
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०९:१०
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०७:४८
२५ मंसिर २०७६, बुधबार १९:३५
२५ मंसिर २०७६, बुधबार १४:५४
२५ मंसिर २०७६, बुधबार १४:४५
२५ मंसिर २०७६, बुधबार १२:३८
२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०७:२९
बागलुङको दमेकमा प्राविधिक पुग्नुअघि बनेका १८ लाभग्राहीले एकमुष्ट रकम बुझे- वडाध्यक्षकाे प्रशंसा
२४ मंसिर २०७६, मंगलवार १९:५४
काठमाडौको चन्द्रागिरी सहित पहाडी ठाउँमा हिउँ प¥यो, चिसोले जनजिवन कष्टकर
२३ पुष २०७५, सोमबार १०:५५
नुवाकोटमा मोटरसाइकल चोरको विगविगी, हप्तादिन नपुग्दै २ बाइक चोरी, सरकारी बाइक पनि चोरियो
१२ माघ २०७५, शनिबार ११:१५
पोखरा बागलुङ सडक खण्डमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? एकपटक यो तालिका हेर्नुहोस्, नत्र बिचल्ली परिएला
२९ माघ २०७५, मंगलवार १३:४८
एनसेलको मुख्य कार्यलयको गेटमा बम बिस्फोट, ३ जना घाइते, थप विवरण आउन बाँकी
११ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०७:४०
ताजा समाचार माेबाइलबाटै सुन्नका लागि हाम्राे अडियाे नाेटिस बाेर्ड नम्बर 1618070701004